Shina Fampivoarana farany muti port portable vaovao finday charger PD100W fanamboarana sy orinasa | Staba Electric
1. endrika maivana kely maivana amin'ny haben'ny sakaiza.
2. Fahazoana haingana indrindra amin'ny famahanana haingana hatramin'ny 50%.
3. Seranan-tsambo USB (A / C) mahery be ho an'ny fitaovana finday.
5. Fahombiazana avo indrindra hatramin'ny 94%.
6. Fitsinjaram-pahefana manan-tsaina ho an'ny finday.
*Multi Usb C Fast Charger 100W Fampahalalana momba ny famaritana
Ny charger USB-C rindrina dia mety indrindra ho an'ireo mpampiasa izay te hanana charger kely izay maivana sy mahery. Ny famoahana hatramin'ny 100 W, charger rindrina PD dia ny fitaovana tianao indrindra ao anatin'izany ny telefaoninao, Nintendo Switch, ary MacBook (miankina amin'ny antsipirian'ny fitaovana ny fotoana famandrihana).
Manasongadina ny fivoarana farany amin'ny haitao haingam-pandeha haingam-pandeha, fandefasana herinaratra USB-C ary fandefasana haingana haingana, ity charger tokana ity no ilainao hampandeha ny fitaovanao ankehitriny ary hijanona eo alohan'ilay fiolahana ho an'ireo fitaovana elektronika ho avy. Ireo seranana roa ireo dia afaka mandefa hatramin'ny 18 watt ny vidiny avo lenta amin'ny zava-drehetra manomboka amin'ny finday avo lenta sy tablette ka hatramin'ny solosaina finday USB-C noana toa ny Macbook 12-inch. Manohana fiampangana haingana ho an'ny iPhone handoavana ny iPhone 8 na taty aoriana hatramin'ny aotra ka hatramin'ny 50% ao anatin'ny 30 minitra miaraka amin'ny tariby tafiditra ao anatiny, ary finday avo lenta / tablette hafainganam-pandeha tsara indrindra.
Powered by GaN tech, ity charger ity dia 30% kely kokoa noho ny charger hafa, matevina be miaraka aminao na aiza na aiza alehanao. Ity charger kely 100W PD miaraka amin'ny fandefasana herinaratra USB ity dia midika famoahana haingana ho an'ireo fitaovana ampiasain'ny USB-PD. Ity charger USB USB roa-mpizaha tany ity dia novolavolaina mba hanomezana 5 heny ny herin'ny charger mahazatra amin'ny fitaovana maro miaraka. Manasongadina ny fivoarana farany amin'ny haitao haingam-pandeha haingam-pandeha, fandefasana herinaratra USB-C ary fandefasana haingana haingana, ity charger tokana ity no ilainao hampandeha ny fitaovanao ankehitriny ary hijanona eo alohan'ilay fiolahana ho an'ireo fitaovana elektronika ho avy.
PD charger rindrambaiko misy mifanentana & manovaova, vahaolana famahana roa-in-iray izay afaka manohana ny fitaovana mandeha amin'ny USBC sy USBA toa ny telefaona sy ny aptops hiasa irery na miaraka. Ny mpamaky rindrina USB miaraka amina famolavolana plug azo ovaina dia ahafahanao misoroka ny toeram-pivoahana hafa ary mamerina mametraka ny seranana USB A / C ho an'ny fametrahana tariby mifandray tsara - tena ilaina indrindra rehefa mampiasa tariby herinaratra na mpiaro onja miaraka amina toerana maro. Mpanamboatra rindrina USB PD miaraka amin'ny fanaparitahana herinaratra manan-danja, manatsara ny fahombiazan'ny asa na fitaovana tokana na maromaro.
Refy: 63 * 63 * 30.5mm
Hery lehibe 100w Gan Pd Charger
Manome herinaratra famatrarana 100W goavambe - ampy handefasana solosaina finday USB-C 2 sy smartphone 2 miaraka. Fivoahan'ny USB-C: 5V = 3A / 9V = 3A / 20V = 5A. USB-A Output 5V = 2.4A max isaky ny seranana.
Fanokanana herinaratra manan-tsaina Macbook P, ro Charger
Manome herinaratra mamaly hatramin'ny 100W raha misy fitaovana iray mifamatotra amin'ny seranan-tsambo USB-C, na mizara ny vokatra hatramin'ny fitaovana 4 mifandray. Izany dia ahafahana mameno ny hafainganam-pandeha haingam-pandeha ho an'ny fitaovana maro hafa miaraka.
Universal Compatibility QC 3.0 Wall Charger
Natao ho an'ny fampisehoana tsy misy kilema amin'ny alàlan'ny telefaona USB-A sy USB-C, takelaka, solosaina finday, sy ny maro hafa, ao anatin'izany ny 15-inch MacBook Pro, 2018 MacBook Air, ary Dell XPS 13-inch, sns.
Fampandehanana haingana Multi Usb Quick Charger
Izy io dia afaka miasa amin'ny alàlan'ny herinaratra ambony sy ny fifandimbiasam-peo izay miteraka mpamaky kely sy mahomby kokoa
Manaraka: Travel be herinaratra malaza 65W karazana c pd usb charger PD65W